Toriteny Alahady 20 Jolay 2014 | FJKM Amboniloha
Toriteny Alahady 20 Jolay 2014
«HO AN’NY OLONA REHETRA NY FAMONJENA»
Mazàna isika dia mitaintaina, mitebiteby amin’izay mety hoavin-tsika ; eny fa na dia ireo fiangonana fito tany Asia aza dia nitebiteby ny amin’izany. Ary dia mametraka ny fanontaniana hoe : “ mba manana anjara ao amin’Andriamanitra ve aho ? ”
Ny hafatry ny Tompo nefa dia :
Aza mitomany : Miambena, mihareta, ary tano mafy izay efa azonao ary mibebaha mandrakariva.
Jesoa no ilay mpiandry tsara : Any Aminy ny lakilen’ny bokin’ny fiainana, noho izany dia izy irery ihany no afaka manokatra izany. Voalaza rahateo fa tsy misy mankany amin’ny Ray afatsy amin’ny alalany ihany.
Mifototra tanteraka amin’Andriamanitra isika, Jesoa Kristy irery no afaka mampiditra ny anarantsika ao amin’ny bokin’ny fiainana.
Takiana amintsika ny fiainam-bavaka: Fiankohofana masiana, fampiasana ny fanomezam-pahasoavana, ary farany fa tsy kely indrindra, ny fanoloran-tena.
Mihirà fihiram-baovao : Fampahafantarana an’I Jesoa fa Izy irery no mpanavotra, Izy irery no mpanjaka. Fampahafantarana ny olona fa Jesoa irery no Tompo sy Mpamonjy, ary ny olona rehetra dia mandray anjara amin’ny famonjena.
Ho an’Andriamanitra irery ny voninahitra!!!
Nitory ny teny : Pasteur Haja Andrianarisoa
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 22 juillet 2014